နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအင်တာနက်ဆာဗာကြီးများ။ ( DNS Root Servers)
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအင်တာနက်ဆာဗာကြီးများ။ ( DNS Root Servers)
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အင်တာနက်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ( Domain Name Root Servers) ကြီးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီဆာဗာ ကြီးတွေသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ လည်းအင်တာနက်သုံးနိုင်မှာမဟုတ် ပါဘူး။ အဓိက DNS root server ကြီး
1. Kelowna, British Columbia, Canada
2. Des Monines , Lowa , USA
3. Chicago , lllinoie , USA
7. Casarano, Italy
11.Cochin, Kerala, India
13.Melbourne, Victoria, Australia
Posted by P Kyaw Swa at 10:16 PM